कसैसँग नझुक्ने र निडर हुन्छन यी राशिका व्यक्ति, तपाई पनि पर्नुभयो की ? – Khabaarpati
कसैसँग नझुक्ने र निडर हुन्छन यी राशिका व्यक्ति, तपाई पनि पर्नुभयो की ?
October 16, 2020 October 16, 2020 Khabar PatiLeaveaComment on कसैसँग नझुक्ने र निडर हुन्छन यी राशिका व्यक्ति, तपाई पनि पर्नुभयो की ?
काठमाडौँ । ज्योतिषशास्त्रका अनुसार जति पनि राशि छन् ती सबै उत्तिकै महत्वपूर्ण छन् । तर, त्यसमध्ये पनि ४ वटा राशि यस्ता छन्, जो वास्तवमै धेरै बलिया हुन्छन् । यी राशिहरु यती बलवान हुन्छन् की, त्यहाँ अरुले दबिएर बस्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ ।
यो श्रेणीमा सबैभन्दा पहिलो नम्बरमा मेष राशि छ । यी राशि अन्य सबै राशिभन्दा उर्जावान मानिन्छन्। यो राशिका मानिसहरु सधैं सक्रिय रहन्छन्, रोक्नु यीनिहरुको स्वभामा हुँदैन्।
यदी कसैले यो राशिका मानिसहरुलाई दिक्क बनाउँछ भने उनीहरुले त्यसको वास्ता गर्न छाडिदिन्छन्।मेष राशिका मानिसहरु कसैमाथि भरोसा गर्दैनन्। कुनै पनि कुरालाई सधैं आफू मातहत राख्न सक्षम हुन्छन्।कुनै पनि कार्यमा आफ्नो निर्णय लागू गर्न चाहान्छन्, र धेरैजसो अवस्थामा सफल पनि हुन्छन्। यिनिहरु कसैसँग प्रभावित भएर आफ्नो जीवनको दिशा बदल्दैनन्।
२) बृश्चिक राशि
बृश्चिक राशिका मानिसहरु समर्पित र इमान्दार हुन्छन् । साथै यस राशिका व्यक्तिहरुको भित्र विद्रोही भावना पनि प्रमुखताका साथ हुन्छ ।जो मानिसहरु योग्य हुन्छन्, उनीहरुसँग यस राशिका व्यक्ति इमान्दारी निभाउँछन् ।तर, जो व्यक्तिहरु खुद धोकेबाज हुन्छन् ती व्यक्तिहरुले भने यस राशिका व्यक्तिबाट सदैव सा विधान रहनु जरुरी हुन्छ। यो राशिका मानिसहरु धेरै भावुक पनि हुन्छन्।जसकारण कहिलेकाँही यीनिहरुलाई सहन मुस्किल पनि हुन्छ। बृश्चिक राशिका मानिसहरुमा भविश्यका संभावित घटनाबारे थाहा पाउने अद्भुत क्षमता हुन्छ।
३) कुम्भ राशिः
कुम्भ राशि भएका मानिसहरुको सबैभन्दा ठूलो विशेषता भनेको के हो भने उनीहरु भावनामा बगेर कुनै निर्णय गर्दैनन्। यदी जरुर पर्यो भने यिनीहरु आफ्नो भावना र समवेदनाहरुको पनि वास्ता नगरी अगाडि बढ्न सक्छन्।कुम्भ राशिका मानिसहरु धेरै रोचक र जिज्ञासु हुन्छन्। यिनीहरु बुद्धिमान पनि मानिन्छन्। यिनीहरु जिद्धी स्वभावका हुनुका साथै आत्मविश्वासी पनि हुन्छन्।
४) मकर राशिः
यो राशि सबैभन्दा उत्कृष्ट राशि मानिन्छ, किनभने यो राशिका मानिसहरुमा आत्म नियन्त्रणको भावना धेरै प्रबल हुन्छ।अन्य राशि भएका व्यक्तिको मकर राशिवालाहरुमा उत्कृष्ट तरिकाले सोच्ने र सम्झने क्षमता हुन्छ। यो राशिका मानिसहरु सधैं सक्रिय रहन्छन्।मकर राशिका मानिसहरुमा आत्मविश्वास धेरै नै हुन्छ। जस कारण यो राशिका मानिसहरु धेरै छिटो सफलता हासिल गर्न सक्छन्।